Lahatenin'ny filoha | Sichuan Mingtaishun Cemented Carbide Co., Ltd.
Fanavaozana sy fitadiavana fahamarinana
Fiaraha-miasa sy fanambinana
Misaotra indrindra an'ireo namana rehetra izay mijery ny Vondron'ny Sichuan Mingtaishun. Noho ny fahatakaranao, ny fahatokisanao, ny fikarakaranao ary ny fanohanananao, dia hamerina ny fivoarany maharitra ny Sichuan Mingtaishun Group. Ny Mingtaishun Group dia hiaina mifanaraka amin'ny fahatokisany ary hanitrikitrika ny fanavaozana sy ny fandrosoana amin'ny indostrian'ny fitaovana CNC handresena ireo zava-tsarotra. Amin'ity dingana ity dia tsy nisy na dia kely aza izahay, ary nandika hatrany tamim-pankasitrahana sy maha-matihanina fa ny orinasan'i Mingtaishun dia manolo-tena "hifantoka amin'ny teknolojia fitaovana, mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa, manangona fahendren'ny ekipa ary mamaly ny filàna ara-tsosialy".
Niorina tamin'ny 2011, Mingtaishun Group dia nandia fanovana sy fampandrosoana maro. Izy io dia mitazona ny soatoavina ifotoran'ny "fanavaozana sy fikatsahana fahamarinana, fahatokisana ny teknolojia, fiaraha-miasa ary fifanambinana", ary ny hevitra hoe "mitarika vanim-potoana vaovao amin'ny fanapahana fitaovana ary manokatra dia vaovao ho an'ny fitaovana fanapahana" Hadinoy ny fikasana tany am-boalohany ary mandrosoa.
Raha mijery ny lasa isika dia afaka mahatratra ireo zava-bita ankehitriny noho ny vanim-potoana lehibe amin'ny fanavaozana sy ny fisokafana, ny fanohanana sy ny fitiavana ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina, ny mpiasa mahatoky sy marin-toerana ary ny fanoloran-tena tsy misy fitsaharana an'ny vahoaka Mingtaishun. Ny fikatsahana sy ny tolona tsy an-kijanona.
Raha mijery ny zava-misy ankehitriny isika dia efa manana ekipa izay miezaka hatrany hanatsara ny tena, ekipa efa za-draharaha, ary teknolojia indostrialy, fitaovana famokarana ary fitaovana fitsapana. Mingtaishun dia nanjary iray amin'ireo mpamatsy tsara indrindra ny fitaovana CNC any Shina, ary ny andiam-pamokarany dia ny Fiderana iraisan'ny mpanjifa marobe vokatr'izany dia nanamafy ny toe-tsain'ny orinasa Ming Taishun "hampiroborobo ny asa-tanana sy mikatsaka kalitao tena tsara".
Miandrandra ny ho avy dia manolo-tena izahay "hifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa", hahazo ny fon'ny fotoana, handresy ny fanahin'ny asa mafy, hitady fanavaozana sy fanovana ary hiroso mankany amin'ny iraka lehiben'ny "fitarihana vanim-potoana vaovao amin'ny fanapahana fitaovana ary manokatra dia vaovao ho an'ny fanapahana fitaovana "dia tohizo.
Noho ny nofy, alao mialoha. Miaraka amin'ny fanavaozana teknika iray, fanavaozana ny vokatra iray, fampandrosoana ny mpanjifa iray ary fanatsarana kely ny fitantanana, mifantoka amin'ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa izahay, mamorona harena ho an'ny fiaraha-monina ary mamorona ny ho avy ho an'ny orinasa sy ny mpiasa!